Wacnayda reer Baligubadle iyo Reer Salaxley oo Hal wado wadaaga! by Fuaad Abdillahi Hassan(Hadhwanaagnews) Thursday, June 21, 2012 Mashallah, waa arin farxo in bulshada reer Somaliland ay qaadeen wadadii horumkar iyo Mashallah, waa arin farxo in bulshada reer Somaliland ay qaadeen wadadii horumkar iyo iskaashiga kana maarmeen ku godii daaquudyada (Deeqbixiyayaasha). Gargaarka iyo nasriga ilaahay kadib, waxa ay bulshada reer Somaliland fikirkooda iyo tacabkooda ku jiheeyeen horumarinta Deegaankooda.<?xml:namespace prefix = o />
Hadii aynu tusaale usoo qaadano horumarka xaga Dhiska iyo dayactirka wadooyinka Somaliland oo looga dareeray gobolada Somaliland badankooda,
1. Waxaa wadooyin tiro badan laga hir galiyay gudaha qaar ka mid ah magaalooyinka waawayn ee Somaliland Sida Hargeisa, Berbera, Borama, Burco iyadoo ay is kaashanayaan dad
waynaha iyo dawladu.
2. Reer Awdal iyagoo kaashanaya dawlada waxay guntiga u xidheen sidii ay u dhamaystiri lahaayeen wadada isku xidha Dila iyo Borama oo imika waxyar ka hadhsan tahay, wajigii hore ee wadada oo uu dhawaan madaxweynuhu xadhiga ka jaray.
3. Dawgii cad ee waqooyiga hargeisa oo ahaa jid aad u dhib badan oo buuralay ah waxaa iska kaashanaya bulshada deegaan ahaan kasoo jeeda taasi oo u dhaw in laga gaadho guul.
4. Wadada isku xidha Burco iyo Hargeisa oo ah wado aad u dheer laguna qiyaaso 190km waxay Bulshada reer Somaliland iyo dawlada oo iska kaashanayaan dhiskeeda oo lacag badan ku baxayso, imikana uu socdo qaadhaan uruurinteedii.
5. Horumarkaa baaxada leh ee dhanka wadooyinka ah waxaan ka maqnayn oo qabanqaabadeedii baryahanba socotaa wadada isku xidha Baligubadle iyoHargeisa oo diyaar garawgeedii iyo kharash uruurintii lagu gudo jiro.
6. Waxaa sidoo kale dhawaan la bilaabmay wajigii hore ee wadada isku xidha Hargeisa  Salaxley, oo ah wado dhagax-tuulkii yaalo oo u baahan qabyo tir iyo dib u dhis baaxad leh.
Hadii aan u dhaadhaco biyo dhaca iyo Ujeedada qoraalkayga waxaan Shaashadaha iyo warbaahintaSomaliland ka daalacday Dhagax dhigii iyo bilawgii wadada Salaxley ilaa Hargeisa, waxaa sida filinka I horyimid iyana oo markiiba maskaxdayda kusoo dhacday qaban qaabo iyo Lacag loo uruurinayay baryahanba wadada Baligubadle ilaa Hargeisa, Labadan wado oo labaduba hargeisa kusoo xidhaya baligubadle iyo salaxley.
Kadib waxan is waydiiyay wadaag laaanta hal wado? Aqoon laaan iga haysa masaafada ay isku jiraan labada deegaan darted waxaan baadhay Khariidada Somaliland oo ay ku xusan yihiin Baligubadle iyo Salaxley, markiiba waan helay, sidii aan marka horeba dareemayay waxaa isoo baxay isku dhawaansho labada deegaan ah, qiyaastii Salaxley waxay hargeisa u jirtaa 57 KM, Baligubadle waxay hargeisa qiyaastii u jirtaa 70km.
Inkasta oo aanan helin Masaafo sax ah ooFogaanshaha u dhexeeya Hargeisa, Baligubadle iyo Salaxley qiyaastii waxaa isoo baxay in Baligubadle iyo Salaxley ay isku jiraan ugu badnaan 20 km, Isla labada deegaana koonfur ka xigaan hargeisa, Hadaba caqligaygu wuu I siin waayay laba deegaan oo wadaaga deegaan iyo dadba in ay samaystaan laba wado oo isku barbar socda Bari iyo Galbeed.
Khariidada Somaliland oo laba dhibcood oo buluug ah aan ku muujiyay Magalooyinka Baligubadle iyo Salaxley.
Sidaa darted walaalahayga labada deegaan ee ku jira qabanqaabada ama gudiyada loo xilsaaray dhiska wadooyinkaas, waxaan usoo jeedin lahaa, in bulshada labada deegaan iska kaashadaan hal wado wadaag ah, oo isku xidha Baligubadle-Salaxley-Hargeisa, taasi oo u wanaagsan horumarka labada deegaan iyo is dhex galba labada bulsho.Sidoo kale hal wado oo labada deegaan wadaagaan waxay madhxinaysaa kharashkii ku bixi lahaa labada wado, oo ay u isticmaali karaan horumarka labada deegaan ee xag waxbarasho, caafimaad ama adeegyada kale ee aasaasiga ahba.
Sida Gudida dhiska wadada salaxley iclaamiyeen waxa ku baxaya wadada Salaxley 4 Millin In kastoo wadadu hore dhagax u yaalay, taa lidigeedana aanan ogayn lacagta ku baxaysa wadada Baligubadle, balse hadiiba aynu tusaale usoo qaadano inay tahay 12 million dollar labada lacagayaw oo marka la isku geeyo, Saamigoodu noqonayo 16 million dollar.
Hadaba labada deegaan oo sida aan qiyaasayo isku jira ugu badnaan 20 km waxaa laga yaabaa hadii ay ku heshiiyaan Hal wado oo wadaag ah iskuna maraysa Deegaanka oo dhan in karaskhka guud ee ku baxayaa ugu badnaan noqdo 8 million, halkaa waxaa inoo madhxay 8 million dollar, lacag yarna maaha ee waaa lacag lagu kabi karo labada deegaan horumarkooda amaba waxay u bixin karan Tabaruc oo waxa lagu dhisi karaa wado kale.
Wadada burco sida aynu ognahay waxay dhex maraysaa deegaan hal beel iyadoo sidaas ah hadana beelihii kale ee Somaliland gaar ahaan beesha degan Bariga Burco inta aan ogahay waxay xaga hore kaga jirtaa dhiska iyo fikirka labadaba, Gacmo wada jir bay wax ku gooyaan, iskaashiguna waxa uu dhalaa barakada oo badata.
Gabagabadii, Dadka qaar waxa laga yaaba, sida somalidu caanka ku tahay inay u fasirtaan inaan kasoo jeedo labada beelood ee Salaxley iyo Baligubadle midkood oo aan xaglinayo, xaasha midna ma ihi, waxaanse ahay muwaadin reer Somaliland waxaana igu kalifay Maqaalkan in aan ku dhiirigaliyo walaalahayga deegaankaas oo is huran mar walba in ay iska kaashadaan horumarinta iyo aayo ka tashigooda.
Fiiro- Gaara: Inkastoo dhulka Somaliland Maydh ilaa Saylac aan arkay, Hadana ma hayo Masaafada dhabta ah ee u dhaxaysa baligubadle ilaa Salaxley, Markaa hadii ay masaafada Salaxley iyo Baligubadle iga qaldanto maaha mid aan ugu talo galay.
Ugu danbayn wixii gaf ah ee qoraalkayga ku jira waxaan ka raaligalinayaa cid kasta oo ka damqatay, waxaanan soo dhawaynayaa cid kasta oo taageertay fikirkayga. Wixii danbi ah sidoo kale ilahaay ayaan danbi dhaaf waydiisanayaan.